Naịlọn kreenu pole
Naịlọn ụlọ elu kreenu pole
Naịlọn mkpịsị pole
naịlọn echebe pole
Elevator naịlọn pole
ndu eriri waya
akụkụ nylon pụrụ iche
Huafu naịlọn-Pioneer nke naịlọn ala setịpụrụ emeputa
site ha na 20-09-10
Dị ka China ọkachamara emeputa nke naịlọn ngwaahịa, Huafu e aku na-amị dị iche iche naịlọn pulleys na akụkụ karịsịa na ahaziri naịlọn ngwaahịa, Anyị na-agbalị kasị mma anyị na-enye ihe ngwọta nke ndị ahịa dị iche iche oru chọrọ. Orlọ ọrụ Dorman Long Technology bụ ...
Kedu otu esi ejikwa wiil naịlọn kwa ụbọchị?
site ha na 20-09-03
Ngwunye wheel naịlị na-agbanwe agbanwe na-ete mmanụ na mmanu; mgbe echichi, axles na / ma ọ bụ kemeghi management center atụdo na-uko. Mmiri mmiri niile a na-eji eme ihe agaghị enwe eroding na egweri ihe. The ahịa bụ maka kwesịrị ekwesị mmezi na ac ...
Tee nke naịlọn Parts
site ha na 20-07-17
Site na mmepe nke akụ na ụba ụwa na iri afọ ndị na-adịbeghị anya, ọchịchọ maka ngwaahịa nylon abawanyela nke ukwuu. Dị ka ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na ngwaahịa plastik, a na-eji ngwaahịa naịlọn eme ihe n'ọtụtụ ebe na injinia n'ihi uru ha pụrụ iche. Naịlọn (polycaprolactam) nwere ...
Okwu Mmalite nke Naịlọn
Dịka ihe dị mkpa na ngalaba plastik injinia, ngwaahịa nylon na-ejizi igwe, ụgbọ ala, akụrụngwa eletriki, na ụlọ ọrụ nkwukọrịta. Ebe a, anyị na-ewebata uru nke naịlọn pulleys: 1. High n'ibu ike; ezi nguzo; ezi ọdụdọ na comp ...
Mba 37, okporo ụzọ Shanyang, Huaian City, China